Ukuthola Imikhosi Yokuwa e-Albuquerque
I-united states I-New Mexico I-Albuquerque
Imikhosi ye-Albuquerque Fall
by U-Aileen O'Catherine
Imikhosi yokuwa nemisebenzi yokuvuna iqala ngo-Agasti e-Albuquerque. Nakuba iqala ngokusemthethweni ngasekupheleni kukaSeptemba, amaqabunga aphuzi kanye namazinga okushisa apholile abonisa ukufika kwawo phakathi nenyanga. Kunemikhosi eminingi yokuwa emihle nemisebenzi yokuvuna okumele uyikhethe, ngakho-ke ube ne-cider, khetha ithanga futhi ulungele. Ngaphambi kokuthi wazi, kuyoba i- Halloween .
Ama-Orchards we-Apple Picking
I-Apple inkathi eNew Mexico iyamangaza abaningi. Kunezithelo eziningi zemifino kulo lonke izwe futhi zimbalwa ezimbalwa endaweni yase-Albuquerque. Thola enye eduze kwakho, futhi uhlele ukuchitha usuku oluphuma nezingane, noma nje umise ngebhasi, ibhasikidi, noma ithuba lokubheka. Insimu ngayinye yezitshalo igxile ezinhlobonhlobo ezinhlobonhlobo zezithelo zonke zaseMelika.
Ungaphuthelwa ithuba lakho lokukhetha ama-apula esifundeni esenyakatho sase-Albuquerque eMgungundlovu wonyaka we-Manille Villa kanye nokugubha ukuvuna. Thola i-ranch ku-9718 Loretta Drive NW.
02 ka 06
Ezindaweni zokudla ezendawo kanye nakwezimakethe zomlimi isikhathi sokuwa sisho isikhathi sokugaya i-chile. Ama-hard die true afuna isikhwama esikhulu ngamanani aphansi kakhulu, kepha ukunambitheka kwe-New Mexico yama-chile pod ayikwazi ukushaywa, kungakhathaliseki ukuthi inani lentengo ngayinye.
Thola mayelana nokukhwabanisa kwe-chile, kusuka ekubhakeni nasekukhoneni, lapho ungathenga khona ama-pods.
03 ka 06
I-stomp yamagilebhisi, yenza i-cider, udle ummbila othosiwe. Vakashela umkhosi wokuvuna futhi ujoyine kumnandi.
Imikhosi yokuvuna ihlanganisa ama-apula wokukhetha, umkhosi we-sunflower, umkhosi we-chile, ama-beer fest, ama-salsa fiestas kanye ne-pinto fiesta. Jabulela ubuhle benkathi bese uthatha ezinye izithelo nemifino ukuthatha ekhaya.
04 ka 06
I-Raspberries iningi eNew Mexico, okungase kube isimanga kwabanye. Kodwa abalimi bayazi ukuthi ama-raspberries ayajabula ehlane eliphezulu.
Thatha uhambo lwaminyaka yonke ukuya eSalman Ranch eMora ukuze ukhethe amajikijolo akho, noma uzame ukuwaqoqa eChimayo. U-Heidi manje usekhethile eLos Lunas. Awukwazi ukuhamba kahle, kungakhathaliseki ukuthi uziqoqa ukudla okusha, noma ukwenza i-jam. Futhi ungaphuthelwa iTome Berry Farm , lapho ungakhetha khona noma ukuzithenga nge-pint.
I-Rio Grande Community Farm ikhiqiza inkinobho yemifino ngonyaka ngamunye, njalo ngesimo esihlukile. Ngo-2016, le nkinga ivuleke ngezimpelasonto evulekile ngo-Okthoba. Ukuthola indlela yakho ngayo kuyinjabulo enkulu, futhi kuthatha ukuhlela, ikhono kanye nenhlanhla encane. I-Maze nayo ine-after hours amahora ahanjisiwe.
Ungathatha uhambo oluya emgodini wethanga nje ngaphandle kwedolobha, noma uvakashele owodwa edolobheni uma ungafuni ukuya kude. Khetha ezinye ukuhlobisa ngesikhathi se-Halloween.
I-Patchkin Patch enkulu kunazo zonke kule ndawo yi-McCalls Pumpkin Patch e-Moriarty. Yisiko saminyaka yonke salowo onabantwana abancane, njengoba kukhona imisebenzi, ukugibela, futhi-ke, ukukhetha ithanga. UMcCall unayo inkambu yezinkumbi kulabo abajabulela ukulahlekelwa ezinhlakeni ngosuku lwekwindla.
UGalloping Grace usehlangothini olusentshonalanga, eRio Rancho, futhi unikeza izingane ithuba lokufuya ezinye izilwane futhi zibabone zisondele ngesikhathi zikhetha amathanga abo.
I-Wagner Farms inikeza okuvela emathandeni ensimu kokubili ezindaweni zabo zeLos Lunas nase-Corrales. Zombili lezi zindawo zinikeza ikhamera ye-corn kanye nokugibela ensimini ukuthola i-globe ephelele ye-orange.
Amapulazi omphakathi waseRio Grande ahlinzeka izingane ithuba lokuthola ithanga njalo ngempelasonto ngo-Okthoba, kanye nethuba lokuzulazula emgqeni wendawo.
I-Bars Along Central e-Nob Hill Albuquerque
New Mexico Museum Museum of Natural History and Science
I-Albuquerque yiDuke loMuzi
Amaphakheji wokuzalwa wama-Park Park
Amahora Omsebenzi Wama-Black Friday ku-Albuquerque
I-De Smet I-Dairy Izici Zomsoco Okunambitheka Omuncu
I-Houston Black Gay Pride 2016 - I-Houston Splash 2016
Ukuthatha i-Eurostar: I-Complete Guide
AmaKilabhu Okuzivocavoca NamaKlasi Wokuzivocavoca eQueens, eNew York
Ama-Essentials Ukuhamba Amabalazwe ku-County Mayo
Indlela Yokukhulula Amaphoyinti Nama-Amakha akho Amakhadi Wesiko
Amamaki & Amaphoyinti
Ukuncintisana kwe-Bocuse d'Or
I-Texas Budget Vacation Destinations
I-asthma e-Phoenix naseTucson
Ngaphambi Kokuya eMexico
Iyini i-Zip Code ye-Red Hook, eBrooklyn?
C no-O Ama-Canal Photos: Kusukela eGeorgetown kuya eCumberland, MD
Vakashela uLouis 'Lunch: Indawo Yokuzalwa YaseH Hamburger
Izindawo ezidumile eziHuntshiwe / ezokuvakasha eJapane
I-Torrey Pines Izintaba: Izinkuni, Izilwane zasendle kanye nama-Wave